China Kitchen foil fenda WL840-320 ụlọ ọrụ na-emepụta | Jiahua
：Dị ： Kitchen foil fenda
Nha ： 840x320mm
Ikike ： /
Ọkpụrụkpụ ： 0.058mm
Mbukota ： 100pcs / Carton
Ctn Nha ： 620x300x355mm
Foto dị na foto Nkebi Nke WL840 / 320
Kitchen foil fenda
Mbukota 100pcs / katọn
Ctn Nha 620x300x355mm
anyị nwere ụdị iko achicha efere, BBQ pans, dị iche iche na mpaghara nwere dị iche iche oriri àgwà, otú anyị nwere ike dị ka ndị ahịa 'chọrọ, na-emeghe ebu.
N'oge a ọtụtụ mmadụ na - eche banyere ahụike na nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi, nke a na - eme ọtụtụ ngwongwo aluminium na - eji akpa plastic. Allwin Pack agafeela ISO9001: asambodo sistemụ njikwa GB / T19001, SGS test, nchekwa nri nri FDA. asambodo, Kosher Food asambodo, na GB48O6.10 National Food Nchekwa Standard asambodo.Allwin Pack utilizes akụrụngwa na-niile kwekọọ na mba gburugburu ebe obibi ụkpụrụ, niile bụ nri ọkwa.We wuru ogologo oge mmekorita ya na ndị ahịa si North America, Europe, Japan, Australia, Asia yana ụgbọ elu, nnukwu ụlọ ahịa, ọrụ nri na ndị na-emepụta nri.Allwin Pack na-eji akụrụngwa niile kwekọrọ n'ụkpụrụ gburugburu ụwa, ha niile bụ nri nri.We wulitela mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa si North America, Europe, Japan, Australia, Asia yana ụgbọ elu, ụlọ ahịa, ọrụ nri na ndị na-emepụta nri.
1. Nchedo - Aluminium foil akpa bụ a nkwakọ ngwaahịa ihe nke nwere ike idi elu na ala okpomọkụ (-20 ° C -250 ° C) na mụ molekul Ọdịdị. Enwere ike iji ya site na friji ruo oven ka ọ rie nri abalị na-enweghị agbanwe agbanwe. Igwe na-egbuke egbuke nke aluminom, eji ọtụtụ oge na oven dị iche iche, na-echekwa ihu ọma ya na ekpomeekpo ya.
2. Aesthetics - Aluminom foil akpa bụ leakproof, siri ike ma dị mfe ịmechaa. Aluminom na-eduzi nke ọma ma na-agba ọsọ na mmiri na mmiri. E jiri ya tụnyere ihe nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ, ihe mkpuchi aluminom nwere ike weghachite ọdịdị mbụ ha ngwa ngwa ma ka mma.
3, nchebe gburugburu ebe obibi - iji ihe eji eme ihe nke aluminom agaghi eme ka emetuta ihe na gburugburu ebe obibi, nchebe, di mfe iji, onu ahia dika ihe plastik, kamakwa chekwaa mmiri.
4. Recyclability - aluminium foil bu ihe eji emeghari ihe di elu, di mfe imebi ya, di nfe imeghari, na imeghari. Enwere ike imeghari ya na uzo obula.
Anyị nwere ike ịmepụta ngwọta dịka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa, na-ejedebeghị na nkwakọ ngwaahịa foom.
Nke gara aga: Obi Foil akpa HT520
Osote: Shell Pan Sh002
Ọkụ ọkụ GSB190
Alu Polygonal akpa SP01